Ogaden News Agency (ONA) – Halyeeyada Ogadeniya een hadhsan waligood Hagardaamada maad ka daysaan – Rabaax M.Cabdi
Halyeeyada Ogadeniya een hadhsan waligood Hagardaamada maad ka daysaan – Rabaax M.Cabdi
Posted by ONA Admin	/ May 27, 2012
Nin dulaysan mayaro danaystuhuna ka sii daran.
Waa duni ninkay dani kaa gasho calooshii u shaqayste yahay.
Waa duni ninkii dani kaa gasho dilaal iyo mukhalas daalay yahay.
Waa aduun ninku dalkuu lahaa ducfinimo uu ka doortay.
Dadyahaw ma anaa waalan mise dadkaa wada danaysta ah?
Dadka damiirkoodii, diintoodii iyo dalkoodii, inay ku doorsadaan diinaar (shilimo) ka door biday, dulinimadaa aniga taas way iga dagi wayday. Bal dib u wada jaleeca, jaha walba kafiirsha si aan isula fahano.
Dulucda hadalka aan leeyahay waxaa weeye; waayahan danbe waxaad arkaysaa dad badan oo dibadaha jooga, shakhsi ahaan wax dhib ah oo haystaana uuna jirin, baasboor caalami ahna haysta, amaba yuuna haysanine danihiisa iska haysta, ayaa intuu halkaa ka soo rucleeyo dusha kafuuli, ragaad aragteen rafaadka haysta say dalkooda uga xoreeyaan gumaysiga diinta, dalka iyo dadkaba dulaysanaya, suu Meles ugu raali galiyo! Akhristow bal adigu iswaydii muxuu doonayaa.! Walaahi waa wax lalayaabo, Bilaahi waa balaayo cusub. Taas waxaa ka sii daran intuu yimaado dalkiisa, danihiisa ku foofi mayee waxuu markaaba dusha ka fuuli wiilashii dantoodii oo dhan u haleeyay difaaca diintooda iyo dalkooda, waxaaba ka sii daran inuusan dhuuni ku helin, maxaa yeelay Ethiopia waan naqaanaa in aan laga dhadhamin-haynin, asna wuu garan taas sida uu wadkiisa u garan, ee gaalnima kale iyo towfiiqda oo laga qaaday iyo Males raali galin ayuu u roorayaa waana nin loo harag luli meel kalana loog heesi.
Nin ku leh; walaalow anaa naftaydii, maalkaygii iyo wakhtigaygiiba u huraya oo dalkana kuu xorayn, kufrigana kaa dulqaadi, rafaadka, gaajada, oonka iyo waxa lamidka ah ee dhibaato halgan ah, anaa u dhabar adaygiye, hadaadan igarab-siinaynin hagardaamada iga daa waxba kaama rabee! Ilaahay baan idinku dhaariyaye ninkaa ma mudan yahay in cadawga loo soo raaco? Runtii waa wax lalayaabo.
Dhacdo tan u eg ayaa waxay ka dhacdayEritrea xiligay la dagaalamayeen gumaysigaEthiopia. Maalin ayaa waxaa dhacday in la isku faraxashay ciidamadii gumaysiga iyo kuwii jabhada. Rag dhaawac ah oo goobtii dagaalkii ku dhaawacmay mid ka mid ah ayaa wuxuu dhagaystay radio waana dhaawac daran. Wuxuu maqlay jaaliyadiiEritrea eeAmericaoo cambaaraynhaysa magaalooyinka qaarkood oo ay ka baxeen duruuf ku timid darteed. Markaas ayuu sxb-kii waydiiyay maxay yihiin ku wani? Sxb-kii ayaa u cadeeyay, wuxuuna oogu jawaabay ayaguna khamrada ha cabaan, hana ku raaxaystaan Maraykanka ana halkan duli iyo darxumo ha igu disho, mar umbaa wadanka la xorayn, dantaan leeyahayna aan gaadhi.
Waa midda ka taagan Ogadeniya maanta. Xaqiiqa waxaa ah; wadan walba amaba ummad walba oo la soo guumaystay dabaqoodhi way lahaan jirtay waana shaqa gumaysi lagu yaqaan, wuxuuna adeegsadaa dadka dhuuni qaadayaasha ah, damiirka aan lahayn dadkooda aan u danaynayn. Wuxuuna u qaybiyaa shilimo yar si ay ugu shaqeeyaan una qabtaan danihiisa.
Laakiin dabadhilifka Ogadeniya waxuu layimid waxaan horay loo arag loona maqal, oo gumaysigii ayuu isugu daray naf iyo maal, qaarna wakhtigii ayayba ugu dareen. Dadkaagii oo lalayn ood lacag oogu darayso dadkii laynayay, dhulkaagii oo la gumaysto ood maal oogu deeqayso dadkii gumaysanayay, diintaadii oo ladulaysan ood ku sii daba taagan tahay dadkii dulaysanayay! waa xaajo day-rin ah, waa dabaqoodhi casri ah oon dunida horay loogu arag.
Ani waxaan odhan lahaa hadaadan nafta hurayn “ halyeeyadaa halgami een hadhsan waligood hagardaamada ka daaya “ waa haduu hadal idin gali. Anaguna waxaa kale oon leenahay go’aankakama danbaysta ah, sidii ay abwaanadii Ogadeniya horayba u dhaheen;
Waxaan ladaaleen la duur galawnay.
Amaan dirayskiyo dabka u qaadnay.
Dalkaynu leenahay ninkii damcaayaw.
Dabin khadhaadhiyo dacar haleefee.
ONLF tii diiday dabar gumaysee.
Ilaaha deeqlaw dawlad xalaal ah
Ayaan kaa doonaye durbaba nasii (aamiiin yaa rabi).
Marka xaalku soo ma ah ninba dhan u badi. Sow ma’aha dhanka khayrka iyo dhanka sharka. Waxaan ku ducaysanaa shahaadada alaw na waafaji wadiiqadiina waan haynaa. Kuwa walafku qaadayna waxay ku ducaystaan Adiis Allaw nagee aan soo aragnee.
Marka labadaas labo lasimi karo ma yihiin. Aduunka way ku kala tageen aakhirana ka sii daran. Labo aduunka ku kala tagtay oo khayr iyo shark ala doortay, aakhiro isma arkayaan, maxaa yeelay fariiq walba wadadiisa ayuu ku faylayaa. Waa jano iyo cadaab.
Wadada xun iyo wadada fiican waxaa lagu galaa siyaaba badan nin walbana asagay u taalaa wadadoo mari lahaa. Ilaahayna qur,aankiisa wuxuu ku yidhi;
(ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) nin walbana abaalkiisa ayuu Alle marin, kii xun xumaan kii wanaagsan wanaag. Ilaahay agtiisana ruuxa oogu wanaagsan waa ruuxa ku dhinta ama lagu dilo asagoo difaaci diitiisa.
Marka gabagadii waxan leeyahay radkaas duliga doortay dhag yaan loo dhigin, halgankana haa la xoojiyo, difaaca hala adgeeyo. Dabadeedna dalkaynu xorayn, taasna waa miduu Alle u yaboohay dadkiisa musminiinta ah, waan tajribo Eebe, nasrigii Alle na wuu dhawyahay.